Codsiyada nuqul ka ah xiriirada ka iPhone in SIM | Dayactirka Bios
1 Sida loo nuqulo xiriirada ka socda iPhone illaa SIM
2 Codsiyada dhoofinta xiriirada iPhone in SIM
2.2 Kaydinta Xiriirada - Qalabka Xiriirinta IS waa bilaash
Hadaad ubaahantahay dhoofinta xiriirada iPhone in SIM oo aad dareentay in aysan jirin wax ikhtiyaar ah oo tan ah, waa in aad ogaataa in ay suurtagal tahay in la sameeyo adigoo rakibaya codsi. Waxa ugu fiican ee ku saabsan doorashadan ayaa ah in aad tirtiri karto codsiga ku rakiban marka aad hesho dhammaan xiriirada qalabkaaga ku kaydsan SIM kaarkaada.
Sidan, ma lumin doontid meel bannaan oo iPhone-kaaga ah adoo ilaalinaya App-ka oo laga yaabo inaadan mar kale isticmaalin muddo dheer. Adigoon ka sheekayn, waa waqtigii aad ogaan lahayd sida koobiyi xiriirada laga bilaabo aalada moobilka ee Apple ilaa SIM kaarkaaga iyo codsiyada diyaarka u ah.
Sida loo nuqulo xiriirada ka socda iPhone illaa SIM
Waa wax caadi ah in la yaabanahay sababta koobiyeynta xiriirada iPhone ilaa SIM, haddii aad hore u leedahay nambarada ku badbaadiyay qalabkayga? Marka hore, ku koobiyaynta xiriirada ku kaydsan qalabkaaga SIM kaarkaaga waxay u adeegi doontaa kayd ahaan.
Haddii wakhti kasta uu kombuyuutarku waxyeelo gaaro, waxaad lumin doontaa dhammaan xiriirada aad ku kaydsatay halkaas. Sidoo kale, haddii aad go'aansato inaad bedesho mobaylka, kuma yeelan doontid dhammaan xiriirada aad la xiriirto qalabkaaga cusub. Sidoo kale, haddii batarigu kaa dhammaado oo aad go'aansato inaad ka saarto SIM-ka si aad u geliso taleefan kale oo gacanta ah si aad u wacdo, xiriiradaaduna ma muuqan doonaan.
Kuwani waa kiisas qaar oo ay lama huraan tahay in xiriirada lagu keydiyo kaarka SIM-ka. Laakin iyadoo ku xiran xaaladaha isticmaale kasta, waxaa jiri doona kiisas kale oo badan oo ay faa'iido u leedahay in la keydiyo xiriiradaada.
Hadda, inkasta oo ay u muuqato in yar oo hoose dhoofinta xiriirada iPhone in SIM, on aaladaha Apple ma aha. Tani waa sababta oo ah, qalabkan, ma jiraan wax ikhtiyaar ah oo ujeeddadaas loogu talagalay. Aaladahan casriga ah, isku xidhka akoonka ayaa loo isticmaalaa si loo helo xidhiidhada, sidaa awgeed, waxa ka maqan shaqo ay ugu diraan xidhiidhada SIM Card-ka.
Hubaal, haddii aad rabto in aad u guurto xiriirada aad iPhone hore in mid cusub, waxa ay u shaqayn kartaa kuu. Laakin, laguma keydin doono xiriirada SIM-kaga, laakiin laguma keydin doono aaladda cusub.
Cilladdan awgeed, horumariyayaal badan ayaa abuuray noocyo kala duwan barnaamijyada lagu koobiyo xiriirada ka iPhone ilaa SIM. Thanks to barnaamijyadan, isticmaale kasta oo u baahan inuu ku wareejiyo buuggiisa taleefanka SIM-ka wuxuu awoodi doonaa inuu si dhakhso ah u sameeyo.
Haddii aad xiisaynayso fikradda qaybta soo socota waxaad ka heli doontaa kaliya codsiyada ugu fiican si aad u nuqul ka sameyso xiriirada iPhone ilaa SIM.
Codsiyada dhoofinta xiriirada iPhone in SIM
Maanta, waxaa jira Apps badan oo aad ku arki karto dukaanka codsiyada Apple. Ku dhawaad ​​si ay u qabtaan hawl kasta gudaha qalab aad waxaa jira codsi kaa caawin doona inaad si raaxo leh u qabato. Laakin, dhamaantood uma shaqeeyaan sidii ballanku ahaa oo qaar ayaa xoogaa adag in la isticmaalo.
Taasi waa sababta, hoos, waxaad arki doontaa codsiyada ugu fiican ee App Store ilaa xiriirada dhoofinta ka iPhone ilaa SIM:
Appkan waa waxa kaliya ee aad u baahan tahay si aad u samayso keydinta laga bilaabo xiriirada iPhone ilaa SIM-kaaga. Waxa ugu fiican ee ku saabsan kaabta Xiriiradayda waa inaadan u baahnayn inaad gasho ama meelna ka samaysato akoon si aad ugu raaxaysato adeegyadeeda.
Kaliya waxay ku filnaan doontaa inaad ka soo dejiso dukaanka codsiyada Apple si aad u bilowdo isticmaalkeeda. Intaa waxaa dheer, App-kan waxaad sidoo kale u diri kartaa liiska xiriirka iimaylkaaga. Sidaa darteed, waxaad awoodi doontaa inaad kaydiso kale oo dhan nambarada telefoonada in aad ku dartay qalabkaaga.
Tilmaamaha ugu cajiibsan ee uu soo bandhigo App-ka kaabta Contacts My Contacts waa:
Kaydinta khadka tooska ah
Soo kabashada fudud.
Ku-celinta VCF (VCard).
Nadiifinta buugga xiriirka.
Sida aad arki karto, sifooyinkani aad bay muhiim u yihiin si loo maareeyo buugga xidhiidhkaaga. Hadda, si aad u isticmaasho codsigan mar lagu rakibay iPhone-kaaga waxaad yeelan doontaa inaad sameyso waxyaabaha soo socda:
Raadi astaanta Xiriiiriyadeyda gudaha liiska codsiga ee qalabkaaga oo fur.
Dooro summada dejinta ee geeska midig ee hoose.
Dooro nooca ikhtiyaarka ah ee qaabka oo dooro midka qaabka VCF.
Markaas, shaashadda ugu weyn, ogeysiis ah furi doonaa in ay tahay in aad aqbasho App this si ay u helaan xiriirada iPhone.
Marka xigta, waxaad arki doontaa dhammaan xiriiradaada iyo badhanka cagaaran oo aad dooran doonto si aad u bilowdo habka koobiyeynta.
Marka habka la dhammeeyo, faylka VCF ayaa la soo saari doonaa.
Ugu dambeyntii, ku keydi feylkan VCF ee xusuusta kaarka SIM-ka dhammaan xiriiradana waxay u muuqan doonaan kuwo lagu daray.
Waa wax fudud in la isticmaalo kaabta Xiriiradayda si aad u dhoofiso xiriiradaada iPhone oo aad nuqul ka sameyso kaarka SIM-ka.
Kaydinta Xiriirada - Qalabka Xiriirinta IS waa bilaash
Gaar ahaan Contacts Bachup - IS Contacts Kit Free waa maamulaha xidhiidhka kaas oo kuu ogolaanaya inaad gasho hawlo badan oo ku jira buugga taleefankaaga. Mid ka mid ah hawlaha ugu caansan ee ay leedahay waa in la koobiyeeyo xiriirada ka iPhone in SIM. Helitaanka shaqadan aad bay u fududahay, laakiin marka hore waa inaad ku soo dejisan kartaa aaladdaada gacanta ee Apple.
Si loo soo dejiyo e rakib Contacts Bachup - IS Contacts Kit waa inaad gelisaa App Store, ka dibna ku qor barta raadinta. Kadib markaad hesho, dooro badhanka "hel" ka dibna "Install".
Marka aad app-kan ku rakibto qalabkaaga, waa inaad raacdaa tilmaamahan si aad ugu koobiyeeyso xiriirada SIM-kaaga:
Geli Contacts Bachup - IS Contacts Kit App.
Marka xigta, sanduuq ayaa ka soo muuqan doona shaashadda oo codsanaya ogolaanshaha si aad u gasho xiriirada iPhone oo waa inaad doorataa badhanka "Aqbal".
Kadib dooro badhanka "Dhoofinta".
Kadib, dooro ikhtiyaarka "Dhammaan xiriirada" oo taabo "Next".
Si aad u dhammayso, dooro qaabka CSV / VCF kaas oo dadka la xidhiidha lagu kaydin doono oo dooro badhanka "Start" si aad u bilowdo habka koobiyeynta.
Marka habkani diyaar noqdo, faylka VCF ayaa la soo saari doonaa oo App-ka ayaa ku weydiin doona meesha aad rabto inaad ku kaydiso. Ka mid ah xulashooyinka waxaad dooran kartaa Gmail, email, Bluetooth ama SIM Card. Markaad dooranayso ikhtiyaarka SIM Card Waxay koobiyeyn doontaa dhammaan xiriirada ka iPhone in kaarka SIM ah.
Sida aad u labisato, koobiyeynta xiriirada ka iPhone in SIM waa suurto gal haddii aad isticmaasho codsiyada oo raac tilmaamaha aad ku aragto in this article. Intaa waxa dheer, Apps-kan waxa kale oo aad habayn kartaa buugga xidhiidhka ee qalabkaaga gacanta. Haddii qodobkan ku saabsan sida loo dhoofiyo xiriirada iPhone in SIM ahaa mid waxtar leh in aad, bilaabaan soo socda our blog.
Previous: post Previous: Sida loo uninstall Fortnite
Next: post Next: Sida loo koobiyo CD-ga PC-gaaga